KWI: Yakabatana CRM, POS, Ecommerce uye Merchandising yeVakakosha Vatengesi | Martech Zone
The KWI Yakabatana Commerce Platform iri-based-based, yekupedzisira-kumagumo mhinduro yehunyanzvi vatengesi. Mhinduro yeKWI, inosanganisira POS, Merchandising, uye eCommerce inogoneswa kubva kune imwechete dhatabhesi, ichipa vatengesi ruzivo rwakakwana, omni-chiteshi.
KWI Yakabatana Commerce Platform
Vatengi Ukama Management (CRM) - unganidza dhata mune yepedyo-chaiyo nguva, saka ako ese mageru ane up-to-date ruzivo. Vatengesi vanobatana vanogona kuona chinzvimbo cheVIP, zviitiko zvakakosha senge mazuva ekuzvarwa, zvekuyeuchidza uye zvimwe zvinokonzeresa, zvakasimbiswa kuPOS kuti ibate nyore mutengi. Mazuva ese data hutsanana uye de-duping inovimbisa kuenderera kwakarurama.
Chinongedzo Chekutengesa (POS) - Mukati mekutengeserana kumwe chete, shamwari dzako dzekutengesa dzinokwanisa kuridza kutengesa, kudzoka, maodha akakosha, kutumira kutengesa uye zvigadzirwa zvinotumirwa kubva kune dzimwe nzvimbo. Isimba rekuendesa rakasarudzika vatengi, muchanza cheruoko rwako.
Kutengesa - Kuwana chaiyo-nguva kuwanikwa kwekutengesa uye zvinyorwa kuitira kuti iwe uve nekukwira-kune-iyo-miniti nzwisiso yezvinoitika nebhizinesi rako. Yese mhinduro dzeKW dzinobva kune imwechete dhata sosi. Yako yakazara data seti inochengetwa narinhi padanho rechinhu, uye inotsvaga zvizere nematanho makumi maviri nematatu ehurongwa hunowanikwa
Ecommerce - Zvese kugona kwaunoda, kunoitwa zvisina musono pamapuratifomu. Hapana data rakatumirwa, zvichikonzera maficha senge kugona kuve nepamhepo ngoro kusiiwa kunoonekwa pane ako Cloud 9 POS zvishandiso.
Kurasikirwa Kudzivirira - Dzivirira bhizinesi rako, uye neako wepazasi mutsara, pamwe neyedu yekurasikirwa nekudzivirira masevhisi chikamu, Iyo Zellman Boka. Zellman Boka ibasa rekudzivirira kurasikirwa & kambani yekubvunza uye mutungamiri anozivikanwa mukudzosera masevhisi kudiwa kwevanhu uye kudzoreredza.
Zvese zveKW's zvegore-zvakagadziriswa mhinduro, kusanganisira KWI Cloud 9 POS (iOS yemuno app w / MDM manejimendi; patent), KWI Merchandising System (browser-based), uye iyo KWI CRM System yakavakirwa kubva kune rimwe dhata dhata.
Izvi zvinogonesa vatengesi kuita sarudzo dzine ruzivo ne 360 ° mutengi maonero nekusimudzirwa kwekuzivisa, kunoenderana nedhata rako rese, kwete chete zvikamu zvacho.
Tags: 360 dhigiriiCRMmutengi wehutano hwehukamaecommerceecommerce chikuvakwikwi commercekurasikirwa nekudziviriramerchandisingchikuva chekutengesaomni-chiteshiPoskubatana kwakabatanakubatana ecommerce